छायांकन नसकिँदै नाफामा जाला त जात्रै जात्रा ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
छायांकन नसकिँदै नाफामा जाला त जात्रै जात्रा ?
फिल्मी फण्डा । फिल्म जात्रै जात्रा अष्ट्रेलियामा प्रर्दशन हुने भएको छ । फिल्म ३५ लाखमा अष्ट्रेलियाको लागि सम्झौता गरिएको हो । टिजर सार्वजनिक भए लगतै अष्ट्रेलियामा मात्र नभई विभिन्न देशहरुमा फिल्मको सम्झौता भईरहेको फिल्म युनिटले जानकारी गराएका हुन् । टिजरको उत्कृष्ट प्रतिक्रियासँगै होर होइन होला इभेन्ट र पप अप इन्टरटेन्मेन्टले फिल्म अष्ट्रेलियाको लागि सम्झौता गरेका हुन् ।
छायाँकन नसकिँदै फिल्म नाफामा जाने निर्देशक प्रदिप भट्टराईले दावी गरेका छन् । फिल्ममा विपिन कार्की, बर्षा राउत, रविन्द्र झा, रविन्द्र सिंह बाँनिया, दयाहाङ राई, राजाराम पौडेल, सोहित मानन्धर, कालु राना लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ। आगामी फाल्गुनको १७ गतेबाट रिलिज हुने फिल्मलाई ‘जात्रा’ निर्देशक प्रदिप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।
प्रदिपकै कथामा सिंगे लामा, यादव पौडेल र रविन्द्र सिंह बाँनियाको लगानी रहेको छ । मित्र डि गुरुङको सम्पादन रहेको फिल्ममा शिव राम श्रेष्ठको छायांकन, र शंखर मर्हजनको द्वन्द्ध रहेको छ । फिल्मको गीतहरुमा काली प्रसाद बास्कोटा, राजन राज शिवाकोटी र कृष्ण भारद्वाजको संगीत रहेको छ ।